Fifanankalozana ara-kolontsaina :: Handray an-tanana ny fanandratana ny fototra malagasy ny « Takalo Tsara » • AoRaha
Fifanankalozana ara-kolontsaina Handray an-tanana ny fanandratana ny fototra malagasy ny « Takalo Tsara »
Manan-karena ary manana ny mampiavaka azy eo amin’ny sehatry ny kolon-tsaina ny Malagasy. Noho ny fahatsapana izany indrindra no nahaterahan’ny fikambanana « Takalo tsara », izay hiezaka ny hanandratra ny kolontsaina malagasy amin’ny endrika sy ny lafiny maro.
Mivondrona ao anatin’ity fikambanana ity ireo mpisehatra amin’ny zavakanto isan-tsokajiny. Nigadona tetsy amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny takarivan’ny alahady teo, ireo solontenan’ny fikambanana Takalo Tsara, nikaroka fiaraha-miasa hiarovana sy hampahafantarana ny kolontsaina Malagasy, tany Chine. Tonga niaraka tamin’izy ireo koa ny delegasiona maromaro misolo tena ny minisiterann’ny Kolontsaina sinoa.
Nisy ny voandalana noentin’izy ireo ho fampandrosoana ny kolontsaina amin’ny endriny maro. «Fifanarahana fanaovan-tsonia eo amin’ny fikambanana sy fanjakana sinoa, izay soloin’ny minisitera misahana ny Kolontsaina tena no nivaingana tamin’ny dia tany. Tanjona ny hametraka ny kolontsaina amin’ny toerany, amin’ny alalan’ny asa maro, ny fampahafantarana ny tantara, ny fampahafantarana ny kolontsaina malagasy isam-paritra. Efa voavolavola ny lamina rehetra mialoha ny fanatanterahana ny asa», hoy Randriamahery José, filoham-boninahitry ny fikambanana Takalo Tsara sady filohan’ny Federasiona malagasin’ny Wushu eto Madagasikara.
Hivelatra amin’ny sehatry ny fianarana koa ny fiaraha-miasa, toy ny fandefasana tanora hiofana any Chine. Haharitra dimy andro ny fivahinianan’ireo delegasiona sinoa eto amintsika. Notsindrian’ity fikambanana izay tarihin’i Nantenaina Christian ity fa fifana-kalozana ara-kolontsaina no fototry ny fitsidihan’ireto farany.
IFM Analakely :: Nanatosaka ny kanto ho an’ ny mpankafy ry Kristel